FIFA Oo Ku Amartay Iiraan In Dumarka Loo Ogolaado Inay Daawadaan Isreebreebka Koobka Adduunka Ee 2022 - Gool24.Net
FIFA Oo Ku Amartay Iiraan In Dumarka Loo Ogolaado Inay Daawadaan Isreebreebka Koobka Adduunka Ee 2022
Madaxweynaha FIFA Gianni Infantino ayaa warqad u qoray xiriirka kubada cagta Iiraan oo uu kaga dalbanayo in dumarka loo ogolaado inay xaadiraan kulamada isreebreebka Koobka Adduunka ee 2022.
Warqada oo ay aragtay BBC Sport, Infantino waxa uu ku sheegay inuu aad uga xun yahay in Iiraan ay ka laabatay balantii aheyd inay garoomada u furaan dumarka.
Bishii Oktoobar ee sannadkii la soo dhaafay, dumarka ayaa loo ogolaaday inay xaadiraan kulan ka dhacay magaalada caasimada Tehran taasoo aheyd markii ugu horeysay ee ay dumar xaadirkaan garoon muddo 40 sannadood ah.
Bishii November, boqolaal dumar ah ayaa ka qeyb galay finalka koobka Asian Champions League oo keentay in kooxda reer Iiraan ee Persepolis ay guuldarro ka soo gaartay kooxda reer Japan ee Kashima Antlers.
Laakiin Infantino ayaa warqada ku sheegay inuu aad uga xun yahay inuu ogaaday in Iiraan ay dumarka u diiday kulankii saaxiibtinimo ee ay la ciyaarayeen Siiriya 6dii bishaan Juun iyadoo dumar badan oo doonayay inay daawadaan la xirxiray.
Warqada Infantino ayaa imaaneysa ka dib markii ay FIFA qiratay inay qalad aheyd inay labo taageerayaal ah ka saareen kulan ka tirsanaa Koobka Adduunka Dumarka ee haatan ka socda France ka dib markii ay soo xirteen funaanado ay ku qoran tahay in dumarka Iiraan loo ogolaado garoomada.
FIFA ayaa sheegtay inay qalad aheyd in taageerayaashaas ka saaraan garoonka iyagoo sheegay in fariintooda ay aheyd mid bulsho oo aysan aheyn siyaasad, waxayna sheegeen inay mustaqbalka taageerayaasha ku ciqaabi doonin taageerada ay u muujinayaan dumarka Iiraan.